Iimpahla ezisebenzayo, iimpahla zemvula, iimveliso zelaphu zangaphandle-zicocekile
Sineqela loyilo lobuchule kunye neqela lokusebenza kworhwebo lwangaphandle.
Shijiazhuang Tidy Fashion Trading Co., Ltd. yasekwa ngo-2011. Umnini kunye namava ngaphezu kweminyaka engamashumi amabini amava yorhwebo lwangaphandle kunye nendawo yethu imveliso, ngoku imveliso kunye nokufunxa iimveliso ezahlukeneyo kumazwe angaphandle kubathengi ehlabathini lonke. Iimarike zethu eziphambili ziquka iYurophu, uMntla noMzantsi Melika, iAfrika neAsia.
I-COVID-19 yenze abantu bafuna ibhegi yomzimba engaphezulu
Iingcali zolondolozo zithi urhwebo lwezilwanyana zasendle lunokuncitshiswa kakhulu emva kokuba ubhubhane we-coronavirus ugqityiwe. Bathi intsholongwane mhlawumbi iqale kwimarike ethengisa izilwanyana zasendle e-China. Le ntsholongwane ivela kwilulwane okanye isilwanyana ekuthiwa yipangolin. Emva koko yawela yaya ...
I-COVID-19 yenza abantu abaninzi banxibe igawuni ye ...
Ukusasazeka kwe-COVID-19 coronavirus yenze abantu abaninzi banxibe igawuni yokuzahlula kunye nezandla zabo, Shijiazhuang tidy fashion co.ltd ivelisa ingubo ye-isalation. Izinto eziphathekayo yiCPE. Imithombo yeendaba zentlalo ithi baninzi ngakumbi abantu abanxibe isinxibo sodwa kwaye bahlamba izandla ...